03 asa mahagaga azonao atao any an-trano mandritra io vanim-potoana coronavirus io - teles relay
Betsaka ny olona voatery nivadika tampoka tamin'ny asa an-trano nandritra ny fipoahan'ny coronavirus noho ny toe-javatra hidiny. Dougal Shaw dia niresaka tamin'ny olona telo tany am-piasana izay noheverina fa ilaina ny fifandraisana mivantana, saingy izay nahita asa lavitra dia nahomby.
Asa izay mitaky fahatokisana tsy hay lazaina, fahaizana mifanintona ary mihaino - saingy tokony hatao mifanatrika ve izany?
Shermeena Rabbi, 39 taona, dia mpikaroka amin'ny fiteny miteny ary mpandraharaha iray mipetraka ao Essex. Izy dia mitarika ekipa mpitsabo 25 izay miara-miasa amin'ny olona manana olana amin'ny serasera. Ny ankamaroan'ireo mpanjifany dia fianakaviana izay manana zaza manana autism, Down's syndrome na olona manana cerebral palsy.
Raha ny mahazatra, ny ekipa miasa any amin'ny toeram-pitsaboana sy sekoly any Londres, fa nanomboka tamin'ny fanakatonana kosa dia voatery nanao zavatra lavitra izy ireo. Ny mpitsabo dia manao antso an-telefaona avy any an-tranony mankany amin'ny tranon'ny mpanjifa. Niantso azy io hoe teleterapy.
"Satria ny asantsika, indrindra amin'ny ankizy, dia mety ho samirery, miha-bava, mifototra ary mifototra, dia nanontany tena isika hoe:" Ahoana ny fomba fiasa? Nalefaka izahay tamin'ny voalohany, "hoy i Shermeena.
Ny fotoam-pitsaboana amin'ny ankizy dia mahavita miasa amin'ny fanononana, matetika amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny kilalao, tandindona ary boky. Ny therapiste koa dia mamaha olana lehibe kokoa, toy ny fifantohana tsara, hoy ny fanazavany.
Copyright copyrightSHERMEENA RABBI
legendNilaza i Shermeena fa ny marary tanora kokoa dia efa nizatra tsara tamin'ny teleterapy
Satria tsy afaka manao ny lafiny ara-batana ny fitsaboana amin'ny Internet ny mpitsabo, tsy maintsy nanolotra izany ho an'ny ray aman-dreny izy ireo, izay tsy ho nanatrika tao amin'ny fivoriana.
Na izany aza, hita ho zavatra mahagaga sy manaitra ary mahasoa izany, hoy i Shermeena.
Gaga izy amin'ny fahombiazan'ny andrana fitsaboana amin'ny Internet. "Ho an'ny marary tanora kokoa, ny efijery nomerika dia ampahany amin'ny fiainana mahazatra," hoy izy.
Tsara ihany ny mahita ireo marary ao amin'ny tontolo fianakavian'izy ireo ary mampihena ny saran-dàlana ho an'ny rehetra, hoy izy nanampy.
Ireo mpandika teny amin'ny fiteny dia mampiasa fampiharana toy ny WhatsApp, Google Meet ary FaceTime.
Manaraka torolàlana matihanina ho an'ny telehealth izy ireo, lisim-panamarinana izay manome antoka ny zavatra toy ny kalitao mikrô tsara ary ny fahaizana mahita ny tavan'ny marary tsara, ao anatin'izany ny molotra sy ny vava.
Nihaona isan'andro tamin'ny 14:30 p.m ny ekipa mba hijerena ny horonan-tsarimihetsika manokana "kapoaka" manokana, rehefa miresaka sy mizara ny fahalalany izy ireo.
Ny marimaritra iraisana dia ny hanohizany hanolotra serivisy hafa io na dia ahena aza ny hidin-trano, ary hihena izy ireo amin'ny toerana ara-batana.
Copyright copyrightANNA TSARA
legendI Anna Wood dia miresaka momba ireo vehivavy manambady
Anna Wood, 40 taona, dia mitantana ny fivarotana akanjo fampakaram-bady any amin'ny tanànan'i Long Buckby, Northamptonshire.
Izy dia efa nitantana orinasa an-tserasera maro teo aloha, saingy nanonofy foana ny hanana toeram-piasana manokana azy. Niala sasatra tamin'ny asany izy ka lasa nanambady - ary tonga fotoana fotoana naha-épollanie azy io.
"Tsy mbola nanana ny traikefa notadiaviko aho tamin'ny fitsidihana ireo fivarotana, fa nahita elanelana teny an-tsena aho," hoy ny tsaroany.
Tiany manokana ny vehivavy mariazy izay "mahatsiaro ho mavesatra amin'ny fizotrany ary mila tanana fanampiana eny an-dàlana," hoy izy.
Tiany ny toerana voafantina - eo amin'ny rihana voalohany ambonin'entana ao amin'ny Street Street - satria ny mpampakatra amin'ny ho avy dia ho toa ny hitsidika any amin'ny toerana iray manokana, saingy tsy tokony hanahy momba ireo mpandalo izy. mijery eo am-baravarankely.
Nosokafana ny boutique ny volana Oktobra 2018 ary nanompo ampakarina 100 teo alohan'ny nitrangan'ny coronavirus.
legendEfa nanonofy foana i Anna hanana ny fivarotany
Na dia tian'i Ana ny habakabaka aza, ny fanakatonana dia nahatonga azy hanontany zavatra, ary ankehitriny izy dia mikasa ny handroaka ny fivarotana ara-batana aorian'ny fandehan'ny fampanofana.
Nilaza izy fa miara-miasa amin'ny mpivady lavitra mandritra ny foreclosure dia "hafahafa efa zatra", saingy amin'ny farany dia mitombina ny asany, fa tsy amin'ny fanilihana ny vidin'ny zavatra toy ny hofan-trano fotsiny. , vidim-barotra sy faktiora momba ny fampiasana.
Azony atao ny miresaka momba ny akanjo mety amin'ny klioba amin'ny alàlan'ny antso an-tsarimihetsika, mandefa azy ireo sary, ary avy eo mandamina ny fety ao amin'ny fivarotana mpamorona na ao an-tranon'ilay ampakarina (miankina amin'ny lalàn'ny hidin-trano).
Ary ny fanidy dia namela azy hifantoka amin'ny ampahany amin'ny orinasa izay hitany fa tena mahafa-po indrindra - inona no antsoiny hoe mpanazatra ny ampakarina. "Tsy ny vehivavy rehetra no manambady amin'ny toerana tena sambatra, somary matahotra ihany ny sasany ary manana resaka fahatokian-tena", hoy i Anna.
legendAnna mahita ny ho avy amin'ny fivoriana amin'ny video miaraka amin'ny ampakarina ho avy
Matetika izy no nanao ny lahateny nataony tao amin'ny faritra iray natokana ho an'ny fivarotana - saingy nahita izy fa ity ampahany akaiky amin'ny serivisy ity dia mety miasa tsara amin'ny Internet, amin'ny antso an-tserasera.
Ny olona ao amin'ny indostrian'ny mpanambady dia efa ela no nahatsapa fa nifindra an-tserasera ny fividianana, saingy nihevitra izy ireo fa mety ho voaforona satria serivisy manokana sy manokana izy, hoy i Anna.
Nefa ny fanidy dia ahafahan'ny olona mahatsapa fa afaka mahazo serivisy manokana amin'ny Internet ihany koa ianao.
Ny taranaka vaovao manambady amin'ny ampitson'iny roa ambin'ny folo sy ny fiandohan'ny folo taona manokana dia nitombo ho toy ny teratany nomerika ary vonona lavitra amin'ity tetezamita ity, hoy izy.
Copyright copyrightANNABEL SHEEN
legendNy mpamokatra nomerika Annabel Sheen dia mbola tsy nihaona tamin'ny mpiara-miasa taminy tao amin'ny tranombakoka
Annabel Sheen, 30 taona, niditra tao amin'ny tranombakin'ny Imperial War Museum any Londres tamin'ny volana aprily. Nakatona ny tranombakoka noho ny coronavirus ny tranombakoka.
Raha ny tokony ho izy dia ho ivon'ny fanaony andavan'andro ny trano. Ny andraikiny dia ny manome aina ny fanangonana - ny mampiavaka azy dia ny fanatanterahana ny fampirantiana nomerika.
"Mbola tsy nifankahita tamin'ny mpiara-miasa tamiko manokana aho, tsy mbola nahazo ny fahazoan-dàlana manokana manokana aho," hoy izy.
Ny fiasana any amin'ny tranom-bakoka iray dia ny fahafantarana ny toerana ara-batana, ny fampiratiana ary ireo curator, ka ny fanidiana dia sarotra lehibe izany.
"Saika ny zavatra rehetra iasako dia vaovao vaovao izay tsy tafiditra ao anatin'ny drafitry ny ekipantsika volana vitsivitsy lasa izay," hoy izy nanampy.
Nahatsapa, ohatra ity video ity - marina, amin'ny fotoana niantsoana an'i Zoom - tamin'ny tafika anglisy tany Far East nandefa hafatra an-tsary noraketina ny havany tamin'ny 1945.
Copyright copyrightRAFITSIKA AN-TANY
legendI Curator Michelle Kirby dia mila naka sary an-tsary ny findainy
Tsy olana ny fidirana amin'ny horonantsary tahiry, fa ny fizahana tamin'ny curator mba hanampiana ny fahaizany ho an'ny fanovana dia midika fomba fanao amin'ny fomba fiasa vaovao.
"Mila manontany ny curator amin'ny alàlan'ny ekipa [toy ny horonantsary toa ny] izahay ary mangataka azy ireo handrakitra ny tenany amin'ny finday fa tsy mampiasa fakantsary ary fitaovana audio mifanaraka amin'ny mahazatra," hoy izy.
Na dia voatery nolavina tao amin'ny andiany aza ny hira sasany, gaga i Annabel fa faly tamin'ny hatsaran'ny asa vitany.
Ireo lahateny ampahibemaso voalaza fa natao tao amin'ny tranombakoka dia nifindra amin'ny Internet ihany koa, ary tokony hanampy amin'ny fandefasana mivantana azy ireo ihany koa.
Tsy andriny ny hihaona amin'ny ekipany manokana amin'ny alàlan'ny fivoahana ny varavarana ary misokatra ny tranom-bakoka.
"Amin'izao fotoana izao," hoy izy, "dia ampahany kely fotsiny amin'ny faran'ny efijery aho mandritra ny fivoriana lehibe. "
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.bbc.com/news/business-53058368
karazana mahasosotra ny fahasalamana